Myanmar True Story: 2015
ဖြစ်ရပ်မှန် သတင်းစုံ ၂၀၁၆ ထွက်ပါပြီ
မြန်မာ့ နာမည်ကျော် မီဒီယာ အစုံမှ သတင်းများ ၊ ဆောင်းပါး ၊ သရော်စာ များ ။ မိုးလေ၀သ ၊ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး ၊ ကျန်းမာရေး နှင့် အလှအပ ဆိုင်ရာ၊ အားကစား ၊ နည်းပညာ သတင်းများ ၊ သတင်းစာများ ၊ ဂျာနယ်များ ၊ မှုခင်း ၊ အိမ်ခြံမြေ ၊ ဗဟုသုတ ၊ ဟာသ ၊ ကား သတင်း စသည့် .. ကဏ္ဍစုံ၊ သတင်းစုံများစွာတို့ ကို တစ်နေရာတည်းတွင် စုံလင်စွာဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည် ။
*** မည်သည်ဖုန်းဖြင့်မဆို မြန်မာစာ မှန်ကန်စွာဖတ်ရှုနိုင်ပါမည် (Unicode/Zawgyi မရွေးပါ) ***
၂၀၁၆ Version ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အသုံးပြုလိုပါက အောက်ပါ Link များမှတိုက်ရိုက် Download ဆွဲကာ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။ Update အနေနဲ့ Playstore က ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ပြီးပြည့်စုံပြီး စုံလင်လှတဲ့ ၂၀၁၆ အခင်းအကျင်းကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ သိနိုင်ဖို့ စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ ။
Download from Playstore - https://play.google.com/store/apps/details?id=org.androitech.aas.truenewsmyanmar
Direct Download Link - http://www.mediafire.com/download/vqajs2qqygbul5l/True_News_Myanmar.apk
Posted by Aung Aung Swe at 1:16 PM No comments:
Happy Birthday Apk Creator
Zaw Gyi -
သင့် ချစ်သူ ၊ သူငယ်ချင်း ၊ မိသားစုဝင် ၊ မိတ်ဆွေတွေရဲ့ မွေးနေ့ အတွက် အမှတ်တရဖြစ်စေဖို့Birthday Wish လုပ်ချင်ပါသလား ။
အဝေးရောက်နေလို့ မွေးနေ့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးဖို့ အခက်အခဲဖြစ်နေပါသလား ။
သင်တို့ အမှတ်တရ ဖြစ်စေမဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ ၊ သီချင်းတွေနဲ့ ၊ သင့် မွေးနေ့ ဆုတောင်းကို ပေးပို့ လိုသူထံ ရောက်ရှိစေဖို့ ဒီ App လေးက အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ပေးမှာပါ ။
ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသ ကပဲ ဖြစ်ဖြစ် အင်တာနက်လိုင်းရှိရုံနဲ့ သင့်ရဲ့မွေးနေ့ ဆုတောင်း အစီအစဉ်လေးကို ခံစားကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ ။
ပြုလုပ်ပုံ လွယ်ကူရိုးရှင်းသလို ၊ အမှန်တစ်ကယ် ကောင်းမွန်တဲ့ ၊ အမှတ်တရဖြစ်စေမဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းတစ်ခု သင့် တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် အခုပဲ စတင် ပြုလုပ်လိုက်ကြရအောင် ။
သငျ့ ခဈြသူ ၊ သူငယျခငျြး ၊ မိသားစုဝငျ ၊ မိတျဆှတှေရေဲ့ မှေးနေ့ အတှကျ အမှတျတရဖွဈစဖေို့Birthday Wish လုပျခငျြပါသလား ။
အဝေးရောကျနလေို့ မှေးနေ့ ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးဖို့ အခကျအခဲဖွဈနပေါသလား ။
သငျတို့ အမှတျတရ ဖွဈစမေဲ့ ဓါတျပုံတှေ ၊ သီခငျြးတှနေဲ့ ၊ သငျ့ မှေးနေ့ ဆုတောငျးကို ပေးပို့ လိုသူထံ ရောကျရှိစဖေို့ ဒီ App လေးက အကောငျးဆုံးဆောငျရှကျပေးမှာပါ ။
ဘယျနရော ဘယျဒသေ ကပဲ ဖွဈဖွဈ အငျတာနကျလိုငျးရှိရုံနဲ့ သငျ့ရဲ့မှေးနေ့ ဆုတောငျး အစီအစဉျလေးကို ခံစားကွညျ့ရှုနိုငျပါပွီ ။
ပွုလုပျပုံ လှယျကူရိုးရှငျးသလို ၊ အမှနျတဈကယျ ကောငျးမှနျတဲ့ ၊ အမှတျတရဖွဈစမေဲ့ မှေးနေ့ ဆုတောငျးတဈခု သငျ့ တဈစုံတဈယောကျအတှကျ အခုပဲ စတငျ ပွုလုပျလိုကျကွရအောငျ ။
Download From Playstore -
သိလိုသည်များ ၊ ပြုလုပ်ပုံများကို မေးမြန်းလိုပါက -
သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည် ။
Posted by Aung Aung Swe at 3:22 AM No comments:
Myanmar Democracy News
Democracy ခေတ်သစ်ရဲ့ ပထမဆုံး နဲ့ အကောင်းဆုံး သတင်း App အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Myanmar Democracy News. အခြား သတင်း App တွေနဲ့ မထူးခြားနိုင်ဘူးလို့ ထင်နေသူများအနေနဲ့ စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ အသုံးပြုနေကျ သတင်းပုံစံများအပြင် Radio ( Mandalay FM / Padamyar FM / Shwe FM / RFA ) စတဲ့ Radio/FM တွေကို နားဆင်နိုင်မဲ့အပြင် ။ တိုက်ရိုက်ပြသလျက်ရှိတဲ့ SkyNet ရုပ်သံလိုင်းများ ။ ဘောလုံးပွဲများနှင့် Highlight များကိုပါ နေ့ စဉ်ကြည့်ရှုနိုင်တာမို့ တစ်နေရာတည်းနဲ့ ပြီးပြည့်စုံစေမဲ့ အကောင်းဆုံး App တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ် ။
Posted by Aung Aung Swe at 4:30 AM No comments:
နေ့စဉ်နှင့် အမျှ ပြောင်းလဲနေတဲ့ ငွေဈေးနူန်းများ ကို သိရှိနိူင်ရန်အတွက် ၊ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး ၊ မြန်မာရွှေဈေး နူန်းများ ကို ရက် အလိုက် Update သိလိုသူများအတွက် Myanmar Exchange မှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု နိူင်ပါသည်။
ကမ္ဘာ့ ငွေဈေးနှုန်း ၃၈ မျိုးကို နေ့ စဉ် ဗဟိုဘဏ်မှ အတက်အကျ အတိုင်း အတိအကျ ဖော်ပြပေးနေသော ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် App ဖြစ်ပါသည် ။
User များ၏ အသုံးပြုလိုမှုအပေါ်မူတည်ကာ အခြား Business Data များကိုလဲ အချိန်နှင့်တပြေးညီဖော်ပြပေးနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည် ။
Posted by Aung Aung Swe at 11:17 PM No comments:
Myanmar vs Kuwait ( 11:30 )
မြန်မာ vs ကူဝိတ် ( ည ၁၁း၃၀ )
နဲ့Website ကကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် ( PC နဲ့ iOs သမားတွေကြည့်လို့ ရပါတယ် )
http://yangoninnovation.com/ ကနေ ကြည့်နိုင်ပါပြီ။
ဖြစ်ရပ်မှန်သတင်းစုံ ပရိသတ်များကို အစဉ်လေးစားလျက် ။
Posted by Aung Aung Swe at 11:29 PM No comments:
Myanmar Football TV (Latest Version)
ပရီးမီးယားလိဂ် ၊ လာလီဂါ ၊ စီးရီးအေ ၊ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ ၊ UEFA ၊ ကမ္ဘာ့ ဖလား ၊ ယူရို ၊ ဆီးဂိမ်း ၊ အာရှဖလား ၊ မြန်မာ ဘောလုံး ( u -16 -> လက်ရွေးစင်) ၊
ရှိသမျှ ဘောပွဲတွေအကုန်ပြပေးမဲ့ Android App ပါ ။
မြန်မာ apk ဆိုတော့ မြန်မာပွဲတွေ မြန်မာကြိုက်တွေ ပိုပြပေးပါတယ် ။
ပွဲလာကာနီးဆို Noti တက်လာပြီး အချိန်နဲ့ ပွဲကိုပြပေးပါတယ် ။
အဆင်အပြေဆုံး Myanmar Football TV ကို Playstore ကနေရယူပါ ။
Posted by Aung Aung Swe at 7:55 AM No comments:
TZ NEWS READER ( LATEST VERSiON 6.3 ) July 18 2015
သတင်းများ အစုံလင်ဆုံး ဆိုတာ အားလုံးသိပီးသားဖြစ်မှာပါ။ အရင် Version အဟောင်းက Link Errors များ ကို ပြန်ပြင်ပီး အကောင်းဆုံး ပုံစံနဲ့ စုံလင်သော သတင်းများ ကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ် ။
သတင်း များ ရယူရန် အတွက် Latest Version ကို ယခုပဲ Download ရယူလိုက်ပါ ။ သူငယ်ချင်းများ သိရန်အတွက် များများ ရှယ်ပေး ပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ မဟုတ်ရင် version အဟောင်း က သတင်းတွေ မတတ်တော့လို့ပါ ။
Google Play Store - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tz.news.reader.androitech
Media Fire - http://www.mediafire.com/download/22orsjswv50js3r
Pcloud - https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZJqTVZOMkqwusE0ajtSkV6wW8RImQ727Fy
Dropbox - https://www.dropbox.com/s/b6i0gpoylq5l5ab/com_tz_news_reader_androitech.apk?dl=0
Myanmar App Store - http://downloadmyanmarappstore.com/?p=477
( ရှယ်ပေးကြပါ ခင်ဗျာ )
Posted by Aung Aung Swe at 9:13 AM2comments:
၂၀၁၅ မှာထွက်ရှိလာတဲ့ " ရယ်စရာ" Android app ..
နေ့ စဉ် ရယ်မောပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့" ရယ်စရာ" app ..
ဟာသကာတွန်းများ .. ဓါတ်ပုံများ .. ဟာသဇတ်လမ်းများ စုံလင်စွာဖတ်ရှုနိုင်ပြီ ။
ဟာသနဲ့ ပတ်သတ်တာတွေကို တစ်နေရာတည်းမှာ အစုံလင်ဆုံး ရရှိနိုင်မဲ့ အကောင်းဆုံး Android App ကို အောက်ပါနေရာများမှ Download ယူနိုင်ပါပြီ ။
Posted by Aung Aung Swe at 1:34 AM No comments:
Error Fixed ထားသော 2015 ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး True News Myanmar
သတင်းအသစ်များ စုံလင်စွာထပ်မံဖြည့်တင်းထားသော နောက်ဆုံးထွက် version ကို Playstore နှင့်
အောက်ပါ Link မှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက် Update ပြုလုပ်နိုင်ပါသည် ။
အဆင်မပြေမှုများအတွက် အနူးအညွှတ်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
အကောင်းဆုံး သတင်း apk တစ်ခုအဖြစ် အစဉ်အမြဲ ကြိုးစားလျက် ..
True News Myanmar - @ 2015
Posted by Aung Aung Swe at 4:48 PM No comments:
ဖြစ်ရပ်မှန် သတင်းစုံ ပရိသတ်များသို့ မေတ္တာရပ်ခံ တောင်းပန်ခြင်း
Facebook Policy Update ကြောင့် သတင်းတွေ ဆက်မတက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် Feedback ပေးလာကြတဲ့ ပရိသတ်တွေရော ၊ မျှော်လင့်နေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကို အနူးအညွတ်တောင်းပန်ပါရစေခင်ဗျာ ။
ဒီ တစ်ရက် နှစ်ရက် အတွင်းမှာ Error တွေကို Fix လုပ်ပြီး ပိုမို ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် Version အသစ်ကို ၊ ခေတ်စနစ်အလိုက် ၊ အချိန်ကာလအကိုက်ဖြစ်အောင် ပြုပြင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ ။
သည်းခံပြီးအားပေးကြတဲ့ ပရိသတ်များကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ ။
တစ်ရက် လောက်သည်းခံစောင့်ပြီး အားပေးကြပါဦး ခင်ဗျာ ။
True News Myanmar @ Myanmar .
Posted by Aung Aung Swe at 1:23 PM No comments:
TELENOR ZERO FACEBOOK AND SERVICES ( Version 2.0)
New Version and New Update !!!!
Telenor ၏ Service များဖြစ်သည့် .. အင်တာနက် Package ၀ယ်ယူခြင်း ...
ငွေလက်ကျန်စစ်ခြင်း .. Prepaid Data Plan ၏ ကျန်ရှိနေသော Data ပမာဏ ကို စစ်ဆေးခြင်း .. တို့ ကိုလွယ်ကူစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အပြင် ။
Telenor ၏ Free Service များဖြစ်သည် . . Zero FaceBook အသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင့် Balance ကိုချွေတာနိုင်ပြီဖြစ်သလို ..
Wiki ကိုလဲ .. Data ကြေး Free ဖြင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကာ .. Knowledge အသစ်များရှာဖွေနိုင်ပါသည် ။
သတင်းများဖတ်ရှုနိုင်ပါသည် ။ Myanmar Wiki ကိုလဲ အလွယ်တကူ အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။
Second Line Facebook အနေဖြင့် Facebook Second Account အသုံးပြုရန်လည်း Latest Version Browser Based Facebook ကို ထည့်သွင်းထားသောကြောင့် .. Facebook Account နှစ်ခုကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ ..
မြန်မာနိူင်ငံ မှ Telenor Network ကို သုံးစွဲကြသူများအတွက် TelezeroFB နဲ့ Facebook ကို သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် ဘေလ် မကုန်ပဲနဲ့ သုံးစွဲနိူင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ..
Play Store မှ ဒေါင်းရန် Link -
Play Store မှ Download ရ်ျ မရပါက Myanmar App Store မှ Download ရယူနိုင်ပါသည် ။
Myanmar App Store တွင် Mediafire Link , Pcloud Link and DropBox Link များဖြင့် အဆင်ပြေစွာ Download ယူနိုင်ရန်စီစဉ်ထားပါတယ် ခင်ဗျာ ..
Developed By အောင်အောင်ဆွေ (AndroiTech Innovation)
Posted by Aung Aung Swe at 6:51 AM No comments:
ဖြစ်ရပ်မှန် 2015 World Cup ( U19 မြန်မာ Version)
ဖြစ်ရပ်မှန် သတင်းစုံ v2 2015 FEB Version တွင် ပိုမိုစုံလင်သော Features များနှင့် အားကစားသတင်း (နိုင်ငံတကာ ၊ Leagueမျိုးစုံ ၊ မြန်မာ့ U19 နှင့် မြန်မာ ဘောလုံးသတင်း) များနှင့် ဇာတ်လမ်းစုံတို့ ကိုပါထပ်မံထည့်သွင်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ..
အကြံပြုတောင်းဆိုချက်များကိုလဲ ၀မ်းမြောက်စွာကြိုဆို၍ .. အချိန်နှင့်တပြေးညီ စိတ်ကြိုက် သတင်းစုံတစ်ခုဖြစ်အောင်အစဉ်အမြဲ ကြိုးစားလျက် ..
Developed By အောင်အောင်ဆွေ (Andro iTech Innovation)
အောက်ပါ Link များမှ တိုက်ရိုက် Update လုပ်နိုင်ပါပြီ ..
Posted by Aung Aung Swe at 10:17 AM 1 comment:
ဖြစ်ရပ်မှန် သတင်းစုံ ၂၀၁၅ အတွက် အသစ်ထွက်ပါပြီ
New Released Version တွင် မူလ ဖြစ်ရပ်မှန်သတင်း နှင့် Video များအပြင် ၂၀၁၅ အတွက်လူအများ မျှော်လင့်စောင့်စားနေသော နိုင်ငံရေးသတင်းများနှင့် အထွေထွေ သတင်းများကိုပါ ထပ်မံထည့်သွင်းထားပါသည် ။
၂၀၁၅ အထူးထုတ် ဖြစ်ရပ်မှန် သတင်းစုံတွင် မူလ Feature များအပြင် .. မြန်မာပြည်သတင်းများကိုပါ ဖတ်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် New Version app ကို Google PlayStore နှင့် MyanmarAppStore တွင် Update ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သလို အောက်ပါ Link မှနေလည်း တိုက်ရိုက် Download ၍ Update ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် ...
Posted by Aung Aung Swe at 6:09 AM No comments:
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ဖြေကြားပေးနေတဲ့ App ပါ ။ ဖြေကြားပေးတဲ့သူတွေ အတွက်လဲ ဖုန်း ငွေဖြည့်ကဒ်မှ စပြီး .. Samsung ဖုန်းအထိလက်ဆောင်ပေးမဲ့ အစီအစဉ် ပြုလုပ်ထားပါတယ် ..
မြန်မာ့နည်းပညာသမားများ စုစည်းဖို့ နေရာတစ်ခုပါ ..
Posted by Aung Aung Swe at 3:46 PM No comments:
TZ NEWS READER ( LATEST VERSiON 6.3 ) July 18 2015...
Error Fixed ထားသော 2015 ခုနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး Tr...
ဖြစ်ရပ်မှန် သတင်းစုံ ပရိသတ်များသို့ မေတ္တာရပ်ခံ တော...